Soupe de riz Malagasy - Recette de cuisine malagasy de Madagascar
par Gaël RAKOTOVAO	 25 juin 2016
Ra toa ka somary tsy de salama na koa reradreraka dia ity recette de Soupe de riz ity atao.
Isan’ny olona: 4 personnes
Fotoana ikarakarana azy : 10 mn + temps de pause: 1h
Fotoana iketrehana azy : 10 mn
Fikarakarana Soupe de riz
Lomana adiny 1 amin’ny rano mandifotra azy sy huile kely ary sel ny vary.
Mandritra izay dia tetehina ny taolan akoho sy taolan-kisoa ary gingembre.
Endasina kosa ny nofon akoho misy sel sy poivre dia atokana.
Esorina ao anaty ro ny taolana dia andrahoina ao ny vary mandra-paha potika, mixer-na raha ela.
Arotsaka anaty vary ny akoho sy salade sy atody manta ary aroina.
Azo atao koa hoe: izy voalona rano sy menaka iny dia cocote minute no andrahoina ny vary. Sady malemy no marihitra.
Soupe de riz au porc, Soupe de riz au poulet, Soupe de riz chinoise, Soupe de riz recette, Soupe de riz thai
Article précédent : Poulet rôti aux herbes de Provence
Salades de PatesArticle suivant :